Ama-tattoos wamasosha: imibono nezincazelo ezinhle kakhulu | abadwebi bomzimba
Nathi Cerezo | | Izinhlobo zamathambo
Ama-tattoos ezempi yilawo aphefumulelwe imizimba ehlukene yezempi, kanye nempahla ehlukene yezempi, ukufeza umklamo, ngokusobala, ongeke ube muhle ncamashi. Empeleni, abangane abavamile balolu hlobo lwe-tattoo izikhali, izingebhezi noma ezokuthutha njengemikhumbi-ngwenya noma izindiza.
Kungakhathaliseki ukuthi kungani uye wakhangwa ama-tattoos ezempi, kulesi sihloko sizokunikeza imibono eminingi. ezahlukene ukwenza tattoo yakho eyingqayizivele. Futhi, uma ufuna ukwazi okwengeziwe ngalesi sihloko kodwa ngokombono ongokomlando, sincoma ukuthi ufunde lesi esinye isihloko mayelana imidwebo yamasosha, isiko lamakhulu eminyaka.
1 Imibono yama-tattoos wezempi angcono kakhulu
1.1 imizimba yezempi
1.1.1 ibutho lezwe
1.1.2 amabutho asemoyeni
1.2 amathuluzi ezempi
1.2.1 amafulege nezimpawu
1.2.3 amathegi ezinja
1.4 izigcawu zempi
1.5 Imisho ehlobene nempi
2 Izithombe zama-tattoos ezempi
Imibono yama-tattoos wezempi angcono kakhulu
Impela wonke umuntu uthanda ukuthula kunempi, nokho-ke, kunezizathu eziningi ezingenza umuntu athole i-tattoo yalolu hlobo, kusukela kumuntu siqu (njengokukhumbula othandekayo noma ngisho nebutho lempi) kuya kwabanye ababonakala bewubala (njengokuba umlandeli wamafilimu empi). Kunoma yikuphi, lapha uzothola imibono yakho konke okuthandayo:
Kungenzeka ukuthi, njengoba ama-tattoos abelokhu eyizwe lamatilosi, aguquke aze afike ezingeni lokuthi ibutho ngalinye lebutho linemidwebo yalo, izinkolelo-ze kanye nezikhuthazo.
Ibutho lezwe, njengoba negama lalo lisho, yilona elisebenza emhlabeni. Ngokuvamile kuba amandla amakhulu kunawo wonke ebuthweni futhi anganikeza imibono emihle ye-tattoo, isibonelo, kusukela kunombolo ye-battalion yeqabane eliwile, ibinzana elithile elihlaba umxhwele noma izixhumanisi zendawo ayemi kuyo.
Kula ma-tattoos kuvamile ukukhombisa amasosha ajwayelekile noma ukugxila kumfaniswano wabo, kanye nokusebenzisa ama-shades amnyama noma amhlophe ukuze anikeze idrama eyengeziwe. Isitayela sangempela naso sihambisana kakhulu nendikimba.
amabutho asemoyeni Bangakwazi ukunikeza ama-tattoos anemibala eminingi, hhayi ngisho nokubonga kumodi eyinhloko yokuthutha yalolu hlobo lwebutho, izindiza.. Isitayela sendabuko, esinemibala egqamile nemigqa egqamile, singabukeka simangalisa nje. Eminye imibono evamile ihlanganisa ukugxila kwenye yezinye izingxenye zendiza (njengophephela, amaphiko…) noma ibutho obukade umiswe nalo, njengama-paratroopers.
Ama-tattoos ezempi aphefumulelwe nge-Navy yiwona avame kakhulu, empeleni, futhi mhlawumbe ngenxa yokuthi ahlobene eduze namatilosi., ababengabokuqala ukungenisa ubuciko be-tattoo kusuka eziqhingini ezikude, kunezinhlobo eziningi ezincane zokudweba ugqozi, njengoba sizobona ngezansi.
Enye yezindlela zokuthutha ezipholile zale ngxenye yezempi imikhumbi-ngwenya. Isitayela sendabuko, njengoba sishilo endabeni yama-tattoos e-air force, siwafanela kahle kakhulu, ikakhulukazi uma ukhetha ukuyenza ibukeke njengoshaka. Ungayenza ibe ngeyakho ngemininingwane efana nenombolo yebutho lakho.
Ulwandle lugcwele izinkolelo-ze, ngakho-ke ama-tattoo e-Navy nawo awahlukile. Ezinye zezinkolelo-ze ezidume kakhulu zihlanganisa, ngokwesibonelo, inkolelo yokuthi ama-tattoo anengulube neqhude avimbela ukuminza, njengoba lezi zilwane zaziphakathi kwezinto ezimbalwa ezasinda ezingozini zomkhumbi (ukuvalelwa emakhejini enziwe ngokhuni ezazintanta uma umkhumbi ucwila).
Futhi ihlobene eduze neNavy, amanye ama-tattoos asebenza ukumaka uma okuthile okukhethekile kwenziwe, njengohambo lokuzungeza umhlaba, ukuzungeza iCape Horn noma ukuhamba ngomkhumbi uchungechunge lwamamayela olwandle.
Ngaphezu kwebutho lezempi, izinsimbi ezisetshenziswa empini nazo ziwugqozi oluqhubekayo kulabo abafuna ukuthola i-tattoo yalolu hlobo.
Ifulege lingamela izwe olivikelayo uma usembuthweni, futhi ingenye yezindlela ezidume kakhulu zalolu hlobo lwe-tattoo, nakuba kunezinye izindlela eziningi zokuyimelela. Ngokwesibonelo, ukhozi ngokushesha ludlulisela umqondo we-United States.
Amasosha awanawo ama-stapler noma amapensela, kodwa ukuphila kwawo kwansuku zonke kusekelwe kwamanye amathuluzi ayingozi kakhulu. Phakathi kwezikhali ezithandwayo zokungafi ku-tattoo sithola izibhamu ze-submachine namabhomu. Uma ufuna ukugcizelela ukuthi zihlobene kanjani nokufa, ungazihlanganisa nezingebhezi, nakuba kuvamile ukwenza kanjalo nama roses, izinsuku...
amathegi ezinja zingenye yezindlela zokukhomba isosha, yingakho njenge-tattoo zivame kakhulu futhi ngokushesha badlulisa umbono ocace kakhulu wokuthi ubani ogqoka lowo mklamo esikhumbeni sabo. Ngokungafani neminye imiklamo, kuvame kakhulu ukuyithola ngesitayela esingokoqobo, eqoshiwe ezindaweni ezifana nentamo noma isifuba.
Izithombe zingenye yezindlela zomuntu siqu esingakhumbula futhi sihloniphe ngazo othile., ikakhulukazi uma ukusekele esithombeni esidala. Zingaba nombala noma omnyama nomhlophe, futhi zibukeka kahle ngesitayela esingokoqobo, nakuba kuzodingeka uthole umdwebi we-tattoo onolwazi oluningi kulesi sitayela ukuze umklamo ubukeke upholile.
Esinye sezikhuthazo ezinhle zama-tattoos ezempi yizigcawu zempi, kungakhathaliseki ukuthi zigqugquzelwa yizinganekwane (imvamisa ezivela kumafilimu ohlobo oludumile njenge apocalypse manje o Ibhuloho elisemfuleni iKwai) noma eqinisweni. Njengoba sishilo endabeni yezithombe, njengoba zingama-tattoos avame ukukhetha isitayela esingokoqobo, kuzodingeka ubheke umdwebi we-tattoo ochwepheshe kulesi sitayela.
Imisho ehlobene nempi
Ekugcineni, sigcina sinomqondo olula kodwa onamandla ngokulinganayo, umusho ohlobene nempi. Kunenala esekelwe emazwini ezihlakaniphi nezihlakaniphi ezidumile ongazigqoka uwedwa noma ngenye into. Ngaphezu kwalokho, itimu yemisho ingadlulela ngale kokumelwa kwesithombe futhi ikhulume ngokuthula.
Imidwebo yezempi yezempi ngokuvamile iwumkhiqizo wokuziqhenya noma usizi ngokulahlekelwa othandekayo ngesikhathi ngisebuthweni lezempi noma empini. Nakuba singabalandeli abaningi bokuthula, singathanda ukwazi ukuthi uke wakhetha i-tattoo yesitayela noma ufuna ukuyithola.
Izithombe zama-tattoos ezempi
Indlela ephelele ye-athikili: Ukudweba imifanekiso emzimbeni » Izinhlobo zamathambo » Ama-tattoos ezempi: imibono engcono kakhulu nezincazelo